MH17: Nametraka fitoriana tamin'ny governemanta Okrainiana ny renim-pianakaviana alemanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » MH17: Nametraka fitoriana tamin'ny governemanta Okrainiana ny renim-pianakaviana alemanina
Novambra 30, 2014
800,000 euro no tadiaviny avy amin'ny governemanta Okrainiana. Tamin'ny herinandro lasa, ity reny alemà antsoina hoe Olga L.
800,000 euro no tadiaviny avy amin'ny governemanta Okrainiana. Tamin'ny herinandro lasa teo, ity renim-pianakaviana alemà iray nantsoina hoe Olga L. ity dia nametraka fitoriana tamin'i Ukraine tao amin'ny Fitsarana Eoropeana momba ny zon'olombelona noho ny fanaintainana sy ny fijaliana.
Izy dia renin'ny olona maty tamin'ny fianjerana Airline MH17 Malaysia voatifitra tany Atsinanan'i Okraina tamin'ny fiandohan'ity taona ity. 800,000 1 € (eo amin'ny $ XNUMX tapitrisa eo ho eo) no takiany amin'ny famonoana olona manao tsirambina, hoy ny tatitra nataon'ny gazety alemà Bild am Sonntag.
Nanitrikitrika ilay vehivavy fa tokony nanidy ny habakabaky ny firenena ireo sidina sivily noho ny sidina sivily noho ny ady mafy nifanaovan'ny tafika Kiev sy ny milisy tany atsinanan'ny firenena.
Nilaza izy fa tsy nahavita izany ny governemanta Kiev satria tsy te ho very izy ireo amin'ny sarany mihoapampana. Araka ny voalazan'i Bild, manodidina ny fotoana nitrangan'ny loza dia sidina 700 teo no niampita ny faritanin'i Okrainiana isan'andro, nahazoam-bola amina tapitrisa tapitrisa tapitrisa isam-bolana
Ny renin'ity niharam-boina ity dia natolotry ny mpitsara an'i Elmar Giemulla, mpampianatra lalàna momba ny fiaramanidina. Giemulla dia miasa ihany koa ho an'ny fianakaviana alemanina hafa iharan'ny MH17 tra-boina, izay nanambara tamin'ny volana septambra fa mikasa ny hitory an'i Kiev any amin'ny fitsarana ihany koa izy ireo.
Teratany alemanina efatra no isan'ireo tra-boina tamin'ny 298 nianjera tamin'ny fiaramanidina tamin'ny 17 Jolay tamin'ity taona ity.
Ny tatitra savaranonando momba ny loza natolotry ny mpanao famotorana holandey tamin'ny 9 septambra dia nilaza fa ny fianjerana MH17 dia vokatry ny fahasimbana ara-drafitra nateraky ny zavatra be angovo namelezana ny Boeing avy tany ivelany.
Tamin'ny volana Novambra, ny governemanta holandey dia nandà ny hampahafantatra antsipiriany ny fifanarahana miafina eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny Joint Investigation Team (Netherlands, Belzika, Australia ary Ukraine) izay manadihady ny sidina MH17 nidina. Raha tsy te-hamoaka vaovao ny mpandray anjara, ao anatin'izany i Okraina, dia ho takona afenina.
Talohan'izay dia firenena maro tandrefana no niampanga an'i Russia tamin'io voina io, izay nolazain'izy ireo fa vokatry ny balafomanga an-kalamanjana natombok'ireo tafiky ny mpikomy tany atsinanan'i Okraina niaraka tamin'ny fanampian'i Moskoa.
Russia, izay mandà izany fiampangana izany, dia naneho ny fahasosorana noho ny tsy fisian'ny porofo vaovao naroso tao amin'ilay tatitra. Nanolo-kevitra i Moskoa fa ny UN dia tokony hanendry solontena manokana hanara-maso ny fanadihadiana momba ny fitifirana ny sidina MH17.
Nataon'i Moskoa ho hitan'ny besinimaro ny antontan'isa fanaraha-maso ny zava-nitranga, ary nilaza izy fa nanondro ny mety hampihena ny fiaramanidina Maleziana ny lafiny Okrainiana.